Syria: Bashar Assad iyo Kooxaha Mucaaridka oo sheegay inay diyaar u yihiin Xabad-Joojin - iftineducation.com
Syria: Bashar Assad iyo Kooxaha Mucaaridka oo sheegay inay diyaar u yihiin Xabad-Joojin
aadan21 / February 22, 2016
iftineducation.com – Afhayeen u hadlay Madaxweynaha Siiriya Bashar Assad ayaa Sabtidii shalay shaaca ka qaaday inay dhankooda diyaar u yihiin xabad joojin, walow ay shuruudo ku xireen kooxaha mucaaridka ee dalkaasi ka dagaalamaya.
Hadalka kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha Bashar Assad ayaa lagu soo beegay saacado kadib markii Jamhadaha waaweyn ee ka dagaalamaya Siiriya ay Sabtidii shalay sheegeen inay diyaar u yihiin xabad-joojin socota 2 illaa 3 asbuuc, balse iyaguna sheegay inay marka hore doonayaan in Diyaaradaha Ruushka joojiyaan duqeynta ay wadaan.
Dhinaca Dowlada Bashar Assad ayaa iyaguna shuruud ku xiray xabad-joojinta inaysan kooxaha mucaaridka u adeegsan inay dib si farsameyn ugu qabsan deegaano horleh, waxay sidoo kale dowlada Siiriya shuruud ku xirtay wadamada taageerada Mucaaridka gaar ahaan dalka Turkiga inuu joojiyo hubka iyo ciidamada uu usoo dirayo gudaha wadankooda.
Dalalka reer Galbeedka ayaa wada dadaal lagu doonayo in xabad-joojin laga dhaqan geliyo dalka Siiriya si gar gaar bini’aadamnimo loo gaarsiiyo shacabka ku dhaqan magaalooyinka go’adoonka ku jira oo ay ku hareeraysan yihiin kooxaha dagaalamaya.
Balse todobaadkan ayaa waxaa soo kordheysa cabsida laga qabo in dagaalka Siiriya uu isu bedalo dagaal caalami ah kadib markii Dowlada Turkiga bilowday inay duqeyso waqooyiga Siiriya gaar ahaan dhulka ay ku sugan yihiin kooxaha Kurdida, Ruushka iyo xukumada Siiriya ayaa ku hanjabay inay u jawaabi doonaan Dowlada Turkiga oo xubin ka ha isbaheysiga NATO.
Sidoo kale dowlada Boqortooyada Sucuudiga ayaa sheegtay in ciidamo ka badan 100 kun iyo diyaarado dagaal u diri doonto dalka Turkiga si ay uga qeyb qaataan dagaalka Siiriya iyo la dagaalanka kooxda Daacish, balse Xukuumada Bashar Assad ayaa sheegtay in sucuudiga uusan u socon Daacish balse doonayo inuu la dagaalamo dowlada Siiriya.
Haweeney loo maxkamadeynayo gabar la xaday
Turkiga oo dajiyey Qorshe la dagaalanka Argagaxisada & Amniga Ankara oo si weyn loo adkeeyey